अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – Gorkhali Dainik
विराटनगर । आमाको ईच्छा विपरित ‘भ्याकुम’ प्रयोग गरेर मृ त निकाएको नवजात शिशुको टाउको र छातीमा ग म्भीर चो ट दे खिएपछि पीडित परिवार तथा आफन्तले नोबेल वि रुद्ध आ न्दोलनको घो षणा गरेका छन् । पीडित परिवार तथा आफन्त र छरछिमेकले शुक्रबार नोबेलको ओपीडी सेवा बन्द गर्नेसम्मको चे तावनीसहित आ न्दो लनमा उत्रने घोषणा बिहीबार गरेका हुन् । उनीहरुले उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा.मधु साह र अस्पताल वि रुद्ध प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी समेत दिने भएका छन् । हामीले हदैसम्मको सजायको माग गर्नेछौं, पीडितका लागि न्याय दिलाउन आउनु भएका इटहरीका होमेश्वर ठाकुरले भन्नुभयो–ईच्छा विपरित चिकित्सकले गर्भवती महिलाको बच्चा निकाल्न पाउँदैन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
दक्षिण कोरियाली चर्चित मोडल तथा नायिका सोङ्ग यू जङ्गको २६ वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको छ । हालसम्म उनको मृत्युको कारण पत्ता लाग्न नसकेको म्यानेजमेन्ट एजेन्सीलाई उद्धित गर्दै न्यू योर्क टाइम्सले जानकारी दिएको छ । सोमबार २५ जनवरीमा परिवारका सदस्यको उपस्थितीमा सोङ्गको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । एक आधिकारिक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नायिका सोङ्ग यू जङ्गले २३ जनवरी २०२१ मा यो संसारलाई अलविदा भनेकी छिन् । उनको परिवारको इच्छा अनुसार अत्यधिक मौनताका बीच उनको अन्तिम संस्कार २५ जनवरीमा गरिएको छ ।’ कोरियाको एम्स सङ् एजेन्सीले उनलाई एउटा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । उनको मृत्युको कारणबारे केहि खुलाइएको छैन ।
१४० सर्प पालेकी महिलाको ‘शव’ अजिङ्गरमा बेरिएको अवस्थामा फेला
अमेरिकामा एक महिलाको शव अजिङ्गरमा लटपटिएको अवस्थामा फेला परेको छ। उक्त अजिङ्गर ८ फिट लामो थियो। सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा त यो छ की, मृ त फेला परेकी महिलाले आफ्नै घरमा करिब १४० वटा सर्प पालेर राखेकी थिइन्। अमेरिकाको इंडियाना स्टेटमा ३६ वर्षीय लोरा हस्र्ट नामकी महिलालाई सर्प पाल्ने निकै शोख थियो। तर अचानक महिलाका छिमेकीले बुधबार लोराको श-व देखे। त्यसपछि उनीहरुले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे। द गार्जियलको रिर्पोट अनुसार महिलाका छिमेकी शरिफ मुनसनसँग कयौँ प्रजातिका सर्प छन्। लोराले पनि आफ्ना घरमा त्यसरीनै सर्प पालेकी थिइन्। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा लोराको श-ब जमिनमा थियो भने उनको घाँटीमा ८ फिटको अजिङ्गर बेरीएको… लोराको शरीरमा लटपटिएको सर्प छिमेकी शेरिफको होे। जुन महिलाको घरमा पसेको थियो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा लोराको श-ब जमिनमा थियो भने उनको घाँटीमा ८ फिटको अजिङ्गर बेरीएको
राष्ट्रपतिले नै पर्यटकलाई घुमाउन निस्किन्छन्…..विश्वकै अनौठो देश…!
एजेन्सी । तपाईले राष्ट्रपति बिच सकडमा एक्लै हिँडेको कहिल्यै देख्नुभएको छ ? प्रसंग हो मोलोसिया नाक देशको । जहाँको जनसंख्या ३३ जना छ । जहाँ २९ जना ब्यक्ति र ४ वटा कुकुर गरेर कुल जनसंख्या ३४ जनाको रहेको छ । अमेरिकाको नेवादामा रहेको यो स्वघोषित देशमा आफ्नो अलग कानून, परम्परा तथा अलग मुद्रासमेत रहेको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ । स्थापनाकालदेखि नै केभिन बघले आफूलाई तानाशाह घोषित गरे संचालन गरिरहेको यो देशका नागरिक नै ति राष्ट्रपतिका नातेदार नै छन् । स्वघोषित यो देशलाई अहिलेसम्म मान्यता भने दिइएको छैन । जुन देश २ घण्टामा नै घुमेर सकिन्छ । जहाँ पर्यटकहरुलाई घुमाउने काम नै राष्ट्रपतिले गर्दै आएका छन् ।
आफ्नै पूर्वपतिले पेट्रोल छर्केर आ’गो लगाएको दुई सातापछि चीनमा एक युवतीको मृ’त्यु भएको छ ।लामु नाम गरेकी युवती टिकटकमा चर्चित थिइन् । टिकटकमै लाइभ गरिरहेका बेला पूर्वपतिले पेट्रोल छर्कदै उनलाई आ’गो लगाएर ह’त्या प्रयास गरेका थिए । ग’म्भीर घा’इते भएकी उनको उपचारका क्रममा दुई सातापछि नि’धन भएको बीबीसीले जनाएको छ। ३० वर्षीया लामुले गत सेप्टेम्बरमा अन्तिम भिडिओ पोस्ट गरेकी थिइन्। त्यसको दोस्रो दिन भिडियो लाइभमा आएकी उनको पेट्रोल छर्केर आ’गो लगाइ ह’त्या गरिएको हो। लाइभमा आएकी लामुको लाइभ स्क्रिन कालो भएको थियो भने लाइभ हेरिरहेका प्रयोगकर्ताले उनी चि’च्याएको आवाज सुनेका थिए। घट’नामा संलग्न रहेको आ’रोपमा लामुका पूर्वपतिलाई प’क्राउ गरी अ’नुसन्धान गरिरहेको चिनियाँ प्रहरीले जनाएको छ।यो घट’नापछि चीनमा महिला वि’रूद्ध हिं’साबारेको बहस फेरि चुलिएको छ। लामुले ग्रामीण जीवनशैलीका बारेमा भिडियोहरु पोष्ट
राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर…..!
एजेन्सी, १९ असाेज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकाे स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गएकाे छ । शुक्रबार ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियाे । ट्रम्पको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार शुक्रबार उनलाई ‘उच्च ज्वरो’ थियो भने शुक्रबार र शनिबार दुई पटक उनको रगतमा अक्सिजनको तह कम भएको थियो। एक समय उनको रगतमा अक्सिजन स्याचुरेसन ९३ प्रतिशत थियो भने अर्कोपटक त्यो ९५ प्रतिशत भन्दा तल पुगेको थियो । स्वास्थ्य विज्ञहरूले रगतमा अक्सिजनको मात्रा ९४ प्रतिशत भन्दा तल पुगेका विरामीलाई गम्भीर कोभिड-१९ भएको मान्दछन्। चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसमा शुक्रबार अक्सिजन दिनुपरेको बताएका छन्। यध्यपी शनिबार पुनः दिइयो कि दिइएन भन्ने बारेमा केही स्पष्ट हुन सकेको छैन। डा. कोन्ली ट्रम्पलाई शनिबार एन्टिभाइरल रिडडेभाइरसँगै डेक्सामेथासोन नामक स्टेरोइड प
कोरोना जीवित पार्टी भन्दै संक्रमण जितेर उत्सव मनाउदा यी महिलालाई पर्यो…फसाद..!
काठमाडौं । कोरोना महामारीलाई जितेर उत्सव मनाउनु एक महिलाका लागि निक्कै महंगो सावित भएको छ । कोभिड–१९ लाई जीवित पार्टीको रूपमा मनाएपछि एक महिलालाई निक्कै ठूलो चेतवानी आएको छ । जेसिका गाम्ब्रा नाम गरेकी यी युवतीले पार्टी आयोजना गरेपछि उनको सर्वत्र बिरोध मात्र भएन उनलाई नै बाँकी नराख्ने चेतवानी आएको छ । तर उनी जोड दिन्छिन् कि सबै प्रकारका सामाजिक सुधारका उपायहरू अबलम्बन थियो, किनकि उनी टोस्टमा स्पष्ट थिइनन् । विवाह लगायतका विशेष उत्सवहरुको आयोजना गर्ने २७ वर्षीय व्यक्तिले उनलाई र उनको परिवारलाई कोरोनोभाइरसद्वारा मृत्यु गराइनेछ भनेर बिरामीलाई पठाएको सन्देश पाएका थिए । व्यवसायीले भने कि उनले कडा सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको भिडियोहरु अनलाइनमा साझेदारी गरिसके पछि पनि बाँकी नराख्ने चेतावनी आएको हो । अब जेसिका दावी गर्छिन् कि उनी त्यस्तै पार्टी चाहने मानिसका लागि बुकिङ थालिएको थियो । अर्क